About Us - Spieth (Xiamen) Teknolojia Co., Ltd.
Spieth (Xiamen) Teknolojia Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2001. Isika dia mpanamboatra sy ny mpamatsy ny isan-karazany ny indostria sy ara-barotra sy ny fitehirizana fitaovana rafitra tsaina anao koa anefa manazava fitaovana.
Isika misahana ny amin'ny midinika, famolavolana, ary ny fametrahana ny tsaina anao koa anefa mahomby sy ny fitehirizana vahaolana; manome ny fitaovana isan-karazany fitaovana manazava ny indostria sy ara-barotra isan-karazany ary koa ny sehatra tsy miankina sy andrim-panjakana rehetra manerana izao tontolo izao.
Mampiasa fitaovana high quality nomen'ny Shanghai Baosteel Group (vy lehibe indrindra orinasa ao Shina). Manana fiara nandroso electrostatic vovoka hoso-doko sy ny tsipika 2 mialoha ny fitsaboana fanadiovana rafitra.
Ao amin'ny Spieth, mino isika amin 'ny fitondrana vokatra sy ny fitaovana izay miantoka ny avo indrindra haavon'ny kalitaon'ny fanarahana fitsipika indostria. Mino koa isika fa ny varotra sy ny tetikasa rehetra, na inona na inona ny habeny na ny sarobidy, mendrika tanteraka ny fanohanana avy amin'ny drafitra amin'ny alalan'ny tsara dia tsara ho antsika-varotra taorian'ny fanompoana.
Ho tsara kokoa ny mpanjifa fanompoana, isika dia ho nampitoetra mialoha fivarotana sy Ankehitriny-fanompoana ny fivarotana ary nanao ezaka mba hanome ny mpanjifa amin'ny tsara, ara-potoana sy ny ho avy-mirona tolotra ara-teknika. Spieth manome fahafaham-po ny zavatra ilaina samihafa ny mpanjifa, hanatsarana ny mpanjifa fahafaham-po, ataovy mafy mandritra ny fotoana maharitra fandreseny-fandreseny fifandraisana mpiara-miasa aminao!
Ny filozofia dia ny hanampy anao mba ho feno ny trano fanatobiana entana fampiasana toerana, ny fanandratana ny base de données fampiasana fahazoan-dalana, fanitarana trano fanatobiana entana fitehirizana mahay. Izahay koa hanamaivana vola, isaky ny santimetatra, ary Dime rehetra dia optimisé amin'ny hoatr'izany Products.
Pallet tsaina anao koa anefa Uprights , trano fitehirizana Pallet fitoeran'entana , Gravity Flow tsaina anao koa anefa , Foldable Wire harato fitoeran-javatra , Warehouse Pallet tsaina anao koa anefa System , Pallet tsaina anao koa anefa mpiaro ,